ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » မှိုင်းပထမဦးစွာချိန်းတွေ့ဖို့မရှိပါဆိုရမည်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 27 2020 | < 1
ဂိမ်းကိုညဉ့်: စပျစ်ရည်ကိုသို့မဟုတ်နှစ်ခုတစ်ဖန်ခွက်နှင့်အတူ Fun. ပီဇာ Order, သင့်ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေဟောင်းနွမ်းကျောင်းကိုဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများကိုထုတ်တူး (စစ်ဆင်ရေးထင်, Twister, အဘယ်သူခန့်မှန်း?) သင်မည်မျှရှိသည်ကိုပျော်စရာမှာအံ့အားသင့်စေလိမ့်မယ်!
တစ် Gig Catch: တိုက်ရိုက်ဂီတနည်းနည်းချွတ်ဖိအားကြာ. သင်ကမသောက်ကျော်ကွာစကားပြောခန်းနိုင်ပေမယ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုနှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုနေ့စွဲဖြည့်စွက်စရာမလိုပါလိမ့်မယ်.
တိရစ္ဆာန်ရုံ / Aquarium: မြင်ရနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ဤမျှလောက်ရှိတယ်. လည်း, သင်အနည်းငယ်ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေ, တိရိစ္ဆာန်များကိုကြည့်ကိုပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအဆင်မပြေခါကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် – သင်ကချင်ပန်ဇီကျုပ်မှာအထူးသဖြင့်ဆိုရင်.
စွန့်စားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများ: ဇစ်နံရံကိုတူလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်စိန်ခေါ်မယ့်, segways ကျောက်တောင်တက်. အဖွဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်စရာတစ်ခုပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်ကိုထွက်.
Sparkling Picnic: ဒါဟာclichéတစ်နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမယ့်ပျော်စရာင်ကြောင့်င်, ရင်ခုန်စရာနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာရှောင်တခင်. တော်တော်အစက်အပြောက်ကိုရွေးချယ်ပါ; သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာနှင့် bubbly တစ်ပုလင်းကိုဆောင် ခဲ့. နှစ်ဦးစလုံး - ရင်ခုန်စရာနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့!
Split ကိုချိန်းတွေ့: လူတစ်ဦးစီ၏တစ်ဝက်ရက်စွဲနဲ့အဘို့ပြုမှအရာတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်. ဒါဟာသင်အချင်းချင်းခန့်ထွက်ရှာပါနှစ်ဦးစလုံးလမ်းအဖြစ်ရောနှောသောအရာတို့ကိုဖွင့်တဲ့ bit နဲ့!